Ahoana ny fiantraikan'ny fifandonana sy ny ady amin'ny toe-pihetseham-pon'ny mpivady | Bezzia
Ny fiantraikan'ny fifandonana sy ny ady amin'ny toe-pihetseham-pon'ny mpivady
Maria Jose Roldan | 15/07/2021 22:37 | fifandraisana
Ny ady na fifandonana ao anatin'ny mpivady dia mazàna miteraka olana isan-karazany amin'ny toe-pihetseham-po amin'ny olona roa. Raha jerena izany dia ilaina ny mahafantatra ny fomba hifehezana ny fihetsem-po toy izany mba tsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny ho avin'ny fiarahana. Amin'ny tranga maro dia sarotra tokoa ity fifehezana ity, noho izany dia tsara ny mangataka fanampiana amin'ireo matihanina mahay mahalala ny famahana ny toe-javatra toy izany.
Raha tsy afaka amin'ny tanana ny fihetsem-po dia tena azo inoana fa ho tapaka hatramin'ny farany ny fiarahana. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasehontsika anao izay mety ho antony mahatonga izany fifanolanana izany ny fiantraikan'izy ireo amin'ny fomba ratsy amin'ny toe-po mampihetsi-po an'ny mpivady.
1 Tsy misy fifandraisana sy fifampiresahana ao amin'ireto mpivady ireto
3 Toerana manokana sy fiainana manokana
4 Olana ara-bola
5 Olana ara-pianakaviana
Tsy misy fifandraisana sy fifampiresahana ao amin'ireto mpivady ireto
Raha tsy misy karazana fifandraisana ao anatin'ny mpivady, ara-dalàna ny fifanenjanana sy fifandonana isan-karazany misy fiatraikany amin'ny ho avin'ny fiarahana izany. Raha tsy voavaha izany dia ara-dalàna fa rehefa mandeha ny fotoana dia misy ny fahadisoam-panantenana, ny fisalasalana ary ny fahasosorana betsaka ao amin'ny mpivady. Ilaina ny fifandraisana mba hiasa tsara ny fifandraisana ary tsy misy olana maro.
Ny fialonana tafahoatra dia iray amin'ireo antony mampipoitra ny ady amin'ny mpivady. Ity fialonana ity dia mifandraika amin'ny fahatsapana tsy fahatokisana sy tsy fisian'ny filaminana amin'ny olona tianao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fisehoan'ny fahasaro-piaro toy izany dia vokatry ny fiankinan-doha amin'ny fihetseham-pon'ny olona saro-piaro amin'ny sakaizany. Raha mitranga izany dia tsy maintsy apetraka ao anaty tsimok'aretina ny olana, raha tsy izany, izy io dia afaka manoratra ny faran'ny fifandraisana mihitsy.
Toerana manokana sy fiainana manokana
Ny fananana vady dia tsy midika hoe mandany tontolo andro miaraka aminy. Ny fikolokoloana be loatra sy ny famerana ny fifandraisana akaiky ao anatin'ny fifandraisana dia tsy tsara ho an'ny fifandraisana. Ny olona tsirairay dia tsy maintsy manana toerana tsy hiampitan'ny mpivady amin'ny fotoana rehetra. Raha mitranga izany dia ara-dalàna ny fifanolanana izay miha-mahazatra ary fahita amin'ny faharatsiany amin'ny toe-po mampihetsi-po an'ny mpiara-miasa aminy.
Ny vola dia iray amin'ireo mpiteraka ady lehibe ao anatin'ny mpivady. Ny fandaniana dia tokony hohamarinina amin'ny fotoana rehetra satria raha tsy izany dia mety hiteraka fifandonana mitohy amin'ny mpivady izy ireo. Raha tsy voavaha io fotoana io, ny fifandraisana dia voaozona hahomby tanteraka. Simba tanteraka ny fihetsem-po ary manomboka mahazo vahana amin'ny fifandraisana ny tsy fahatokisana.
Indraindray, ny fianakaviana matetika no olana lehibe indrindra ho an'ny mpivady iray. Raha eo anilan'ny ankohonany hatrany ny iray amin'ireo antoko ary tsy matoky ny mpiara-miasa aminy dia misy ny ady sy fifandonana. Mitombo ny fihenjanana ary manomboka manomboka tsy voafehy intsony ny fihetseham-po sasany toy ny hatezerana, alahelo na famoizam-po.
Amin'ny farany, ny fifandirana na ny fifamaliana amin'ny mpivady dia miantraika amin'ny toe-po ara-pihetseham-po amin'ny olona. Mba tsy hihalehibe ny raharaha zava-dehibe ny fahafahan'ny roa tonta mifehy ireo fihetsem-po ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ny fiantraikan'ny fifandonana sy ny ady amin'ny toe-pihetseham-pon'ny mpivady
Ireo be mpitia indrindra amin'ny varotra Bershka
Fanafody an-trano hanamafisana ny volomaso